कस्तो राजनीतिक संस्कार ? :संसदबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्ने चेतावनी – ThePressNepal
कस्तो राजनीतिक संस्कार ? :संसदबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्ने चेतावनी
काठमाडे जेठ २९ । नेपाली कांग्रेसका बाग्मती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । बाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल क्रममा शुक्रबार भाग लिँदै कांग्रेस सांसद वैद्यले ओलीको हत्याका लागि आफू नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
Tags: केपी ओली
Previous असार एकबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेपनि जता ततै चूनौतिका चाङ नै चाङ
Next वैधको अभिव्यक्ति आपराधिक, आपत्तिजनक र निन्दनीय